MAWDUUC 3: LEESLAQEEBSADO | Ung & Gravid
MAWDUUC 3: LEESLAQEEBSADO
Yaa la hadlikaraa?
Yey tahay in aan la hadlo?
Yaa rabaa in aan la hadlo?
Yey igu khasabsantahy in la hadlo?
In la’la hadlo dadka kuu dhow
Dadka waaweeyn waxey ku tahay dhib weeyn in ee ka hadlaan dareemaha nolashooda. Sidaa ey tahay dhalanyarta waxey ku tahay dhib in ey ka fikiraan waalidka galmadooda, sida oo kale waalidkane in ey ka fikiraan galmada caruurtooda. Dadka waaweeyn xooga waxey saaraayaan ka hortaga uurka, cudurka hoose iyo xaamilonimo, laakin kama hadlaan in ee tani tahay xiiseyn ama doonis iyo eeriyo nolosha kamid eh.
Dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro waxa uu ka hadlayaa isku dhawaansho, qof kale in aad u fiicnaatid – in aad ka qeebgashid wax adiga kaa weeyn. Janareeshin bandan ayaa ka dhigay tani in ey tahay wax addag in laga hadlo. Dhaqamo kala duwan waxey kala heestaan dhaqamo kala nooc eeyna khabaan xuduudo la dhaafikarin.
Yaa ogaan karo?
Hadii aad ka weeyntaha 16 sano, adiga ayaa dooraneeysid in aad ogeesiisid waalidkaa uurkaaga. Hadii aad ka yartahay 16 sano, uguhoreenta hal waalid ayaa la ogeensiin hadii ilmaha la soo ridaayo. Waxaa oo kale jirto sharcigaan marka laga reebo. Hadiid aad u dhexeeysid 12 iyo 16 sano, taqtarka ma ogeensiinaayo waalidka hadey sabaabo jiraan. Sharciga waxuu dhigayaa in ey naag kasto xaq ee u leedahay in ey ayada dooran karto ilmo soo rideenka. Waxey kale xaq ee u leedahay in la’siiyo ogeeysiin iyo hogaamis.
Ka shaqeyn adiga iska fikir:
Yaa la qeebsadaa?
La dood qof kale:
Maxaa dhacaaya hadii aan la qeebsado saaxiibo?
Qasab miyaa in wiilka ogaado?
Qasab miyaa in waalidka ogaado?
Maxey ay dhib u tahay in waalidka loola hadlo galmad?